android ဖုန်းများအတွက် hola Launcher ကို APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » launchers » hola တင်ပေးသူ
hola Launcher ကို APK ကို
hola တင်ပေးသူ (Theme & Wallpaper) သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတစ်ရိုးရှင်းသေးအစွမ်းထက် launcher! all-in-one မြန်နှုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့်, ဘက်ထရီချွေတာ၎င်း၏အကောင်းဆုံး running သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကာကွယ်နဲ့ app manager ကိုအားသွင်း!
အသစ်စက်စက် themes များ၏တန်နှင့်နောက်ခံပုံများရှိပါတယ် & ထူးခြားတဲ့စတိုင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကို enriches ရာ hola တင်ပေးသူ (Theme & Wallpaper),! တစ်မြန်ဆန်ချောမွေ့နှင့်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေသစ်ကိုခရီးစတင်သာမန် UI ကိုရဲ့ခေတ်နောက်ကျနှေးကွေးမှနှုတ်ဆက်ဆင့်ဆိုရမည်မှာ,
* hola မြှင့်တင်ရန်
သင့်ရဲ့ဂိမ်းများနှင့် app များကိုမြှင့်တင်ရန်, မှတ်ဉာဏ် (RAM) ကိုတက်လွတ်မြောက်, သင့် device ကိုအရှိန်မြှင့်ပြီးပိုဘက်ထရီသိမ်းဆည်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 1 ပုတ် Boost နှင့်ဂိမ်း Boost features တွေသင့်ရဲ့ home screen ကနေတိုက်ရိုက်ပိုကောင်းအောင်လွယ်ကူစေပါသည်။
* MASTER အားသွင်းသည့်
* APP ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု
မလိုချင်တဲ့ app တွေကိုသို့မဟုတ် bloatware uninstall နှင့်အရေးကြီးသောသူမြားကို back up လုပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုများအပိုင်းသင်သည်သင်၏အကျိုးစီးပွားကိုက်ညီသောအသုံးဝင်သော apps များရှာတွေ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်းများကိုစတင်တဲ့အခါမှာအလိုအလျှောက် 30 +% အားဖြင့်သင့်ဂိမ်းအမြန်နှုန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
App ကို Lock ကို Facebook မှာ, SMS ဆက်သွယ်ရန်, ပြခန်း, ဒါမှမဟုတ်သင်ရွေးချယ်အခြားမည်သည့် apps များသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ AppLock ဖြင့်သာသင်ကာကွယ်ပေးသည့်ဓါတ်ပုံများကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ privacy ကိုစောငျ့ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူပါ!
privacy ကိုကာကွယ်ဘို့ Ultimate solution ကို!
* Omni ပွတ်ဆွဲပါ (စက္ကန့်အတွင်း app များကို Switch!)
Omni ပွတ်ဆွဲသင့်ရဲ့ home screen ကိုပြန်သွားစရာမလိုဘဲသင်အခြားအက်ပ်များနှင့် tools တွေကိုအမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။
သင့်ကိုယ်ပိုင် themes များ DIY, ပရိသတ်တွေနဲ့ကျော်ကြားဒီဇိုင်နာဖြစ်လာ!
Facebook မှာ: facebook.com/holaverse
[feature အသစ်] 1 ။ ပိုပြီးပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တိကျသောရာသီဥတုဒေတာနှင့်အတူနယူးရာသီဥတုအသေးစိတ်။
2 ။ အန်းဒရွိုက် 7.0 Nougat နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2016 မှာ 9: 05 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 1, 2016 မှာ 2: 33 နံနက်
ကြော်ငြာတစ်ခုကြီးမားစည်းစိမ်နှင့် yeah, ကြီးသော launcher ။ ငါ4လအတွင်းထက်ပိုမိုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသောပေမယ့်ရှိတဲ့ Junk များ၏တိုးပွားလာငွေပမာဏကိုငါ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်ကြောင့်ထိုသို့ဖယ်ရှားပစ်တယ်။ launchers အများကြီးအတူတူပင်အရွယ်အစားနှင့်အရည်အသွေးပေမယ့်မဆိုကြော်ငြာများနှင့် crapware ခြင်းမရှိဘဲ, ရှိပါတယ်။
မေလ 22, 2016 မှာ 6: 13 ညနေ
ဤအရာသည်အလွန် App ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တယ် ။
ဧပြီလ 13, 2016 မှာ 10: 47 နံနက်
ကိုယ့်ဖုန်းကိုပိုမြန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြင်သောအခါ hola ကျေးဇူးတင်ဈဝမ်းသာတယ်
စက်တင်ဘာလ 15, 2015 မှာ 6: 37 ညနေ
ကတူ UI ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စက်တင်ဘာလ 15, 2015 မှာ 6: 36 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 10, 2015 မှာ 5: 06 နံနက်
ဖိလစ်ပိုင်မှ။ ပိုက်ကွန် surfing အတွက်၎င်း၏ပိုပြီးပျော်စရာ။ hola မှကျေးဇူးတင်ပါသည်
သြဂုတ်လ 19, 2015 မှာ 2: 25 နံနက်
့ iran ထံမှဖြစ်ကြောင်းကိုဈကြောင့်ကိုချစ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2015 မှာ 9: 27 ညနေ
အလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်။ အခုတော့ကိုယ့်ဟာမြန်နှုန်းမြင့် launchers နှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။